राष्ट्रपतिले किन ठड्याए कुकुरको विशाल स्वर्ण सालिक ? पूरा पढ्नुस । - News21Nepal
राष्ट्रपतिले किन ठड्याए कुकुरको विशाल स्वर्ण सालिक ? पूरा पढ्नुस ।
December 11, 2020 news21nepalLeaveaComment on राष्ट्रपतिले किन ठड्याए कुकुरको विशाल स्वर्ण सालिक ? पूरा पढ्नुस ।
देशका राष्ट्रपतिले राजधानीको सडक चोकमा सुनले बनाएको कुकुरको विशाल सालिक ठड्याए भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्ला । तर मध्य एसियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपतिले आफूलाई मनपर्ने एउटा कुकुरको विशाल सुनौलो मूर्ति सडकमा ठड्याएका छन् ।तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोले राजधानी अश्गाबातको एक क्षेत्रमा उक्त कुकुरको मूर्ति ठड्याउन आदेश दिएका थिए । सन् २००७ देखि सासन सत्ता सम्हालिरहेका राष्ट्रपति गुरबांगुलीको आदेशमा तयार भएको उक्त विशाल कुकुरको सुनौलो मूर्तिको मंगलबार अनावरण गरिएको छ । उक्त कुकुरको सालिक ६ फिट अग्लो छ ।राष्ट्रपति गुरबांगुली अलाबी नश्लको कुकुरका पारखी हुन् । त्यसैले उनले सो कुकुरको विशाल सालिक बनाउन लगाए ।
स्मरण रहोस् अलाबी तुर्कमेनिस्तानको रैथाने जातको कुकुर हो । उक्त कुकुरलाई त्यहाँको राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा पनि राखिएको छ ।स्मरण रहोस् राष्ट्रपति गुर बांगुलीले अलाबी कुकुरलाई सम्मान गरेको यो पहिलो पटक चाहीँ होइन । उनले गत वर्षपनि उक्त कुकुरको सम्मानमा एक किताब नै अर्पण गरेका थिए ।सरकारी कर्मचारीहरुको बस्नका लागि बनाएको नयाँ आवास क्षेत्रको सडकमा उक्त कुकुरको शालिक ठड्याएको छ ।कुकुरको शालिकसँगै अलाबी नश्लको कुकुरका बारेमा जानकारीमूलक भिडियो प्रसारित भैरहेको एलइडी स्क्रिनसमेत राखिएको छ ।सुनबाट बनाइएको उक्त कुकुरको मूर्ति तयार गर्न लागेको खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तुर्कमेनिस्तानको सरकारी मिडियाका अनुसार उक्त शालिकले अलाबी नश्लको प्रतिष्ठा र आत्मविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति गुरबांगुली जनावरप्रेमी मानिन्छन् । उनले विश्वमा ठूला ठूला तेताहरुलाई समेत भेटघाटको क्रममा जनावरहरु उपहारको रुपमा दिने गरेका छन् ।गुरबांगुलीबाट घोडा तथा कुखुरको बच्चालगायतका जनावरहरु उपहारको रुपमा पाउने नेताहरुमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन, उज्वेकिस्तानका राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोभ तथा कतारी राजा लगायतका छन् ।
Tagged राष्ट्रपतिले किन ठड्याए कुकुरको विशाल स्वर्ण सालिक ? पूरा पढ्नुस ।
हराएको १० दिनपछि सम्पर्कमा आएकी बुहारीलाई सासु को स्रप्राइज, आखिर किन ? पूरा हेर्नुस ।
यसपालि दशैँमा जता फर्के पनि फाइदा, कसरी पूरा हेर्नुस् ?
October 24, 2020 news21nepal
December 17, 2020 news21nepal
भर्ने हैन त आइपिओ(ipo)?अहिले सम्मकै बिश्वकै ठुलो आइपिओ आउदै? पूरा हेर्नुस ।